कलाकारिता क्षेत्रमा लागेका व्यक्त्तिहरुको पारिवारिक सम्बन्ध किन दिगो हुदैन ? – Jagaran Nepal
कलाकारिता क्षेत्रमा लागेका व्यक्त्तिहरुको पारिवारिक सम्बन्ध किन दिगो हुदैन ?
पछिल्लोपटक रामकृष्ण ढकालको सम्बन्ध बिच्छेदकाे खबरले आम सर्बसाधरणलाई निक्कै चासाेकाे विषय बनेकाे छ ।
गाएक रामकृष्ण ढकाल जस्ता थुप्रै कलाकार हरु हुनुहुन्छ ।
कलाकारितामा लाग्ने हरुकाे कुन्डलिमा ग्रहहरुकाे डिग्री बलियाे हुनु पर्दछ अनिमात्र याे क्षेत्रमा सफल भईन्छ ।
चन्द्रमा बलियो भयाे भने मानिस सुन्दर चन्द्रमुखि पनि भनिन्छ कलाकारितामा सुन्दर हुनु आवश्यक छ ।
अर्काे मंगल ग्रह र सुर्य ग्रहकाे डिग्री पनि १४% देखि २०% सम्म हुनु पर्दछ त्याे भनेकाे सुर्यअनुसार १२ गते देखि २२ गते भित्र जन्मिनु पर्ने हुन्छ यस्ताे भयाे भने हिम्मत र पराक्रम तथा अल्लि जिद्दी पनि गराउने हुन्छ ।
गाइकायानि केटीमान्छेकाे चिनामा वृहस्पति ग्रह भनेकाे पतिकाे कारक ग्रहका रुपमा लिने गरिएकाे छ । विवाहका बेला वर र केटिलाई कन्याकाे रुपमा पुज्ने पनि गरिन्छ ।
वृहस्पति ग्रहले ज्ञानगुन धर्म-कर्म रिति रिवाज शैक्षिक याेग्यता कलाकारितामा लगानी पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ सुरुवाती समयमा लगानी पनि गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यदि केटिकाे चिनामा वृहस्पति ग्रह कमजाेर भयाे भनेपनि कलाकारितामा लाग्न सकिन्छ तर ।
यसले आफूलाई कहिले पनि सानाे तथा दबियर बस्न नचाहाे साेच बिकाश गर्छ वृहस्पति ग्रहले ।
उता मंगलकाे कारणले कलाकारिता ल्याउने भएकाले मंगल भनेकाे सेना हाे जसले सजिलोसँग निर्णय गरिहाल्छ यस्तो अबस्था रहेकाले पनि धेरै कलाकार हरुकाे सम्बन्ध बिग्रेको हाे ।
मांगलिक याेग भएका हरु कलाकारितामा सफल हुने हुदा पनि मंगलले बहुविबाहकाे याेग निर्माण गर्ने हाे ।
जसकाे फल एक भन्दा धेरै विवाह गर्ने याेग भनेर भन्ने गरिन्छ । कलाकारितामा लागेका हरुकाे लक्ष्मी याेग हुनु प्रबल आवस्यक मानिन्छ ।
लक्ष्मीयाेगमा जन्मेका मानिसले अचानक पैसा कमाउने याेग निर्माण हुन्छ भने छाेटाे समयमा प्रसिद्धि गराउन यस्ताे याेगकाे बिशेश भुमिका हुन्छ ।
जन्म समयमा अथवा राशि कुन्डलि अनुसार लग्नेश, पञ्चमेश र भाग्य भाबकाे कुनैपनि प्रकारकाे सम्बन्ध रहेमा मानिसलाइ घर,गाडी, पैसा, सम्मान यात्रा मनाेरन्जनात्मक आदिकाे भरपुर उपभाेग गराउदछ।
तर वैवाहित सम्बन्ध भने सफल हुन दिदैन ।